Degmooyinka oo aan ka falcelin guurka carruurta ee dalka dibaddisa ka soo dhacay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Degmooyinka oo aan ka falcelin guurka carruurta ee dalka dibaddisa ka soo dhacay
Juno Blom: waa muhiim sugidda xaquuqda carruurta
La daabacay fredag 19 februari 2016 kl 11.04
Inta badan degmooyinka dalka xilli denbe ayey ka falceliyaan cadaadinta la xiriirta sharaf dhowr ee dalka dibaddiisa ka soo dhacday.
Waxa la yiraahdo cadaadinta sharaf dhowrka (hedersförtryck) waxaa ka mid ah: guurka qasabka ah, gudniinta gabdhaha iyo qasbid ku dhisan caado iyo dhaqan.
Tusaale waxay ahaan kartaa guurka carruurta iyo carruurta keligood dalka timaada ee ey wehliyaan rag waaweyn.
Sidaas waxay ku xunsantahay warbaxin uu soo saaray maamulka gobolka Östgötland oo dhawaan loo gacangeliyey wasiirka sinaanta Åsa Regnér.
Juno Blom waxay ka howl-gashaa waaxda maamulka gobolkan una qaabilsantahay arrimaha bulshada:
- Qaar ka mid ah carruurtan oo intooda badana ah gabadho waa kuwo rag ku mehersan. Waa jira qeexnaan la’aan dhanka hey’addaha dowliga ah iyo sida ay arrimahan u maareeyaan. Sawirka nooo soo baxay waxuu yahay in carruurtan aysan helin xaquuqdooda aas’aasiga ah iyo taageerada iyo badbaadinta ay xaqa u leeyahiin, aye tiri Juno Blom oo arrimaha bulshada u qaabilsan gobolka Östgötland.
Maamulka Östegötland ayey horey dowladda u xilsaartay iskuduwidda shaqada qaran ee looga hirtagayo cadadinta iyo qasbidda ku dhisan sharaf dhowrka. Warbaxino ka kooban afar qeybood oo maamulka Östegötland u gudbiyey dowladda ayaa lagu sharaxay shaqada halka ay marayso. Mamulka Östegötland ayaa hirgeliyey qad telefoon loogu caawiyo ururada iyo hey’addaha dowliga ee ka shaqeeya la dagaalanka arrimaha la xiriira sharaf dhowrka.
Ku dhawaad 700 goor oo la soo wacay teelfoonkan ayaa boqolkii 22 oo u dhiganta 127 qof, waxay ku saabsaneyd carruur ku nool guur qasab ah.gaar ahaan carruurta keligood waddanka timaaday, inta badan na yahiin gabdho waddanka la yimid rag qaangaar ah oo ay ku mehersan yahiin.
Dacawdo boliska loo gudbiyey
Inkastoo boliska loo gudbiyey dhowr ah dacwado oo arrimahan quseeya hadana ma jirto hal kiis oo ka mid oo loo gudbiyey maxkmad, sida ay tiri Juno Blom.
- Waxaa jira dacwado badan laakiin ma jiraan mid lmaxkmad loo gudbiyey. Waa muhiim in aan qaado tillaaboyin lagu sugayo xaquuqda carrutan. Carruurtan oo ah carruur loo geystey xadgudubyo kalo gedisan balse aan aqoonin sida loo raadsado xaquuqdooda, una baahan in qof weyn oo gaangaar ah ku siiyo helida xaquuqdoda . ayey tiri.
Waxaa jira dacwado dhowr ah oo arrimahan la xiriira oo boliska loo gudbiyey balse midkooda maxkamadey u gudbin. Tusaale waxaa ka mid ah kiiska la xiriiray gabadh 14 sanno jir ah nin qaar gaar ah ku mehersaneyd oo hey’adda Skatteverket u diiwaan-gelisay in ay isqabaan.
Hey’adaha arrimaha bulshada ee degmooyinkana kiisaska arrimahan la xiriira waxay u kalo qiimeeyaan siyaabo kalo gedisan, iyado degmooyinka qiimeyntooda kalo duwan tahay, halka qaar degmooyinka ka falceliyaan waxaa jira kuwo aan habo yaaraateen wax ka falcelin ah sameynin.
- Waa la ma huraan in aan gacta dhulka u dhufano markey timaado guurka qasabka ah ee carruurta oo ogaanaa in guurka carruurta uusan u fiicneyn carruurta. Marna ahan in nala ka arko in ay jiraan carruurt uu guurka u wanaagsan yahay, ayey tiri Juno Blom oo Maamulka gobolka Östegötland u qaabilsan arrimaha bulshada.